Ngoro Pakupedzisira Inobuda Kubva kuGreen Inferno
musha Horror Varaidzo Nhau Ngoro Pakupedzisira Inobuda Kubva kuGreen Inferno
by arun April 16, 2014
by arun April 16, 2014 836 maonero
Pave nenguva kubva patakave nechinhu chekuzivisa nezvazvo Iyo Green Inferno, Eode rudo rudo ode kumafirimu senge Kuurayiwa kweCannibal. Pakupera kwemuswe wegore rapfuura takadzidza kuti Open Road Mafirimu achange achipa flick kuburitswa kwemitambo munaGunyana 5 wegore rino, kunyangwe panguva iyoyo isu tanga tisati taona turera kana kunyangwe iwo ese akawanda mifananidzo. kubva pakumirira kwaRoth kwakamirirwa kwenguva refu kuchigaro chemukuru.
Isu takavimbisa kukuchengeta iwe uchitumira chero patinonzwa zvakawanda uye nhasi tinoita zvakanaka pachivimbiso icho. Turera ye Iyo Green Inferno yakazopedzisira yabuda musango rine vanhu vanodya vanhu, uye tiri pano nhasi kuzokupai mundiro yesirivheri. Uye damn, inonaka here.
Dzvanya bhatani rekutamba pazasi kuti unyure mazino ako mukutarisa kwekutanga kune rimwe ra2014 rinotarisirwa rinotyisa mafirimu, anouya kwatiri neruremekedzo rwe Moviefone!
In Iyo Green Inferno, yakanyorwa-pamwe uye yakarairwa naEli Roth, boka revadzidzi vanoita zvevadzidzi vanoenda kuAmazon mukuedza kununura dzinza kubva mukutsakatika. Rwendo rwacho rwunotora mukana wekutyisa pavanoziva kuti vari kuedza kuchengetedza dzinza remunhu ... uye vava kuda kuita kosi huru.
Seye fan hombe yemafirimu akapfuura aRoth, ndiri kutarisira zvikuru iyi, iyo inofanirwa kunge iri mhepo yemhepo nyowani, pakati pezvose zvinotyisa-zvine themed zvange zvichizadza bhokisi muhofisi mumakore apfuura. Roth's flair yeanorwara, yakamonyoroka uye inotyisa ingangove iri chaiyo pfuti iri muruoko iyo mhando inoda, uye ini handikwanise kumirira kuti ndione maziso angu pane zvinotyisa zvakamirira.
Unoti chii iwe?!